Jurgen Klopp Oo Dhabarka U Ritay Masuuliyadda Guul-darradii Ay Liverpool Kala Kulantay Napoli | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jurgen Klopp Oo Dhabarka U Ritay Masuuliyadda Guul-darradii Ay Liverpool Kala Kulantay Napoli
(04-10-2018) Liverpool ayaa xalay guul-darro qadhaadh kala soo laabatay waddanka Talyaaniga oo ay kula soo ciyaartay Napoli, waxaana daqiiqadihii ugu dambeeyey laga dhaliyey hal gool oo ku qasbay tababare Klopp inuu si buuxda dhabarka ugu rito masuuliyadda khasaaraha.
Tababare Klopp ayaa qirtay in kooxdiisu ay xalay fagaaraha la timid bandhig ciyaareed aad u liita oo aan baryahan lagu arag, isla markaana si weyn looga gacan sarreeyay.
Liverpool ayaa loo diiwaangeliyey in rikoodhkii ugu liitay muddo 12 sannadood ah marka la eego sida aanay hal jeer u tooganin goolka kooxda kasoo horjeedda, waxaana sidan oo kale ay ku dhacday February 2006 kulan ay Benfica kaga adkaatay 1-0.
Haddaba, tababare Klopp oo warbaahinta la hadlay ciyaarta kaddib ayaa qiray in khalad dhinaciisa ka yimid uu sabab u noqday ciyaarta liidata ee kooxdiisu la timid garoonka, waxaanu yidhi: “Qayb weyn oo ka mid ah bandhiggu waxa uu ahaa khalad aan anigu sameeyey, laakiin waxa aan u baahanahay ugu yaraan inaan hal habeen dib u daawado oo aan arko waxa uu ahaa khaladkaas oo aanan filaynin.”
Tababare Klopp waxa uu ballanqaaday inuu sixi doono khaladaadkii dhacay oo ay wax ka baran doonaan, waxaanu yidhi: “Waxa aan hubaa in sababuhu ay cad yihiin kaddibna aanu xallin doono, laakiin maanaan fiicnayn, caadiyanna haddii aanad wanaagsanayn waad khasaaraysaa.”
Tababaruhu waxa uu tibaaxay in qaybtii hore ee ciyaarta ay Liverpool yara fiicnayd, laakiin qaybtii dambe ay kasii dartay, isagoo si gaar ah u tibaaxay in xiddiga kooxda ugu wanaagsanaa uu ahaa goolhayihiisa oo ka badbaadiyey kubbado badan oo goolal noqon lahaa.
“Qaybtii hore xoogaa iska caadi ayay ahayd laakiin qaybtii labaad noomay fiicnayn, mar walbana waa calaamad xun marka la yidhaahdo goolhayahaaga ayaa ahaa ciyaartoyga ugu wanaagsan. Ma garanayo markii ugu dambaysay ee ay nagu dhacdo in aanaan hal mar tooganin goolka.” Ayuu yidhi Klopp.
Liverpool waxa ciyaartan kaga dhaawacmay laacibka khadka dhexe ee Naby Keita oo garoonka laga dhex qaaday, kaas oo Klopp uu tilmaamay inuu dhabarka wax ka qabo, hase yeeshee baadhitaano lagu samayn doono.
Liverpool ayaa waxa Axadda sugaysa ciyaar adag oo horyaalka Premier League ah oo ay la ciyaari doonaan Manchester City, ka hor inta aan la gelin fasax kooban.